Jawaari oo Muqdisho ku qaabilay Safiirka Turkiga ee Somaaliya – Radio Daljir
Jawaari oo Muqdisho ku qaabilay Safiirka Turkiga ee Somaaliya
Abriil 7, 2018 4:19 g 0
Guddoomiyah Golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa Magaalada Muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah danjirayaasha Waddamada Caalamka u jooga Soomaaliya.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa kulanka ugu horreeyay la qaaday Danjiraha Dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bakar.
Bakar iyo jawaari ayaa isla soo qaaday xiisadda siyaasadeed ee hadda ka jirta Soomaaliya,waxaana ay islama meel dhigeen qodobo la isku dayayo in xal looga gaaro khilaafka hadda taagan.
Dhinaca kale Guddoomiye Jawaari ayaa la kulmay siihayaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Martin Dale,waxanaa ay sidoo kale isla soo qaadeen khilaafka ka dhex taagan laamaha xeer dejinta iyo fulinta ee dowladda Soomaaliya.
Gurtida Cabudwaaq oo kaso horjeestay Qaabka loo xulayo Erayda Golaha degaanka Cabudwaaq (dhegayso)